Kukuthinta Kanjani Ukuziphatha Kokuthenga Kwemibala? | Martech Zone
Kukuthinta Kanjani Ukuziphatha Kokuthenga Kwemibala?
NgoLwesithathu, Septemba 1, 2010 NgoLwesine, ngoMashi 18, 2021 Douglas Karr
Isayensi yemibala iyathakazelisa, ngombono wami. Abaqambi abakhulu - noma ngabe bezimoto, abahlobisi basekhaya, abaklami bezithombe, noma abathuthukisi be-interface yomsebenzisi baqonda ubunzima bemibala nokubaluleka kwabo. Ukusuka iphalethi yombala ikhethiwe ukuqinisekisa ukuthi inikezela ukuvumelana - ngemibala yangempela esetshenzisiwe - kunomthelela omkhulu ekuziphatheni komsebenzisi.
Funda kabanzi Ngemibala Nemibala Yemibala
Color kwandisa ukuqashelwa komkhiqizo ngama-80%, okuholela ngqo ekuthengeni kwabathengi. Nakhu ukuthi imibala ithinta kanjani abathengi baseMelika:
Yellow - inethemba futhi iyintsha, evame ukusetshenziselwa ukubamba abathengi bewindi.
Red - inamandla, idala ukuphuthuma, inyusa izinga lokushaya kwenhliziyo, futhi ivame ukusetshenziswa ekuthengisweni kwezimvume.
Blue - kwakha umuzwa wokwethembana nokuphepha. Imibala emnyama ivame ukubonwa ngamabhange namabhizinisi (njengemikhiqizo yami).
Green - ehambisana nengcebo. Umbala olula kakhulu owenziwa ngamehlo ukuze usetshenziswe ezitolo ukuphumula.
iwolintshi - nolaka. Lokhu kudala ukubizelwa esenzweni okuqinile ukubhalisa, ukuthenga, noma ukuthengisa.
pink - ezothando nezabesifazane, ezisetshenziselwa ukuthengisa imikhiqizo kwabesifazane namantombazane amancane.
Black - unamandla futhi ubushelelezi. Isetshenziselwa ukumaketha imikhiqizo kanokusho.
Purple - isetshenziselwa ukudambisa nokuzola, okuvame ukubonwa ebuhleni nasemikhiqizweni yokulwa nokuguga.
Kubathengisi, ukuthenga kuyikhono lokukholisa. Yize kunezinto eziningi ezithonya ukuthi abathengi bathenga kanjani nokuthi bathengani. Kodwa-ke, okuningi kunqunywa yizimpawu ezibukwayo, umbala onamandla kakhulu futhi othonyayo. Lapho kuthengiswa imikhiqizo emisha kubalulekile ukucabangela ukuthi abathengi babeka ukubukeka kombala nombala ngaphezu kwezinye izinto ezinjengomsindo, iphunga nokuthungwa.
Kuthinta Kanjani Imibala Ukukhetha Nokuthenga Komsebenzisi?
Nakhu okuthakazelisayo infographic kusuka ku-KISSmetrics kumbala nomthelela wayo ezinqumweni zokuthenga. Eminye imininingwane:
Abathengi Bomfutho - maningi amathuba okuthi aphendule kuma-blues abomvu, awolintshi, amnyama nasebukhosini. Ubona le mibala ekudleni okusheshayo, ezitolo ezinkulu, nasekuthengisweni kwezimvume.
Abathengi Besabelomali - maningi amathuba okuthi ahlanganyele nama-navy blues namatiyali, abonakala emabhange nasezitolo ezinkulu zeminyango.
Abathengi Bomdabu - bakhangwa opinki, isibhakabhaka esibhakabhaka, nemibala yama-rose etholakala ezitolo zezingubo.
Inothi elilodwa elibalulekile ngaphakathi kwe-infographic ukuthi amasiko ahlukahlukene athinteka ngemibala ngokuhlukile!
Tags: blackgreen blueesinsunduumbalaCommerceezokuhweba ngekhompyuthaukushisaiwolintshiukuziphatha kokuthengaredukufinyelela kweqiniso
I-SMS ayifile. Wake Wezwa Nge-Geo-Uthango?
Sep 17, 2010 ku-9: 40 AM
Lokhu kuyathakazelisa ngempela!
Sep 17, 2010 ngo-2: 35 PM
Lokhu okutholile kuyamangalisa… bengicabanga ukwenza ukuthengiswa okukhethekile maduze kwamakhasimende ami “kwisabelomali”. Futhi manje sengiyazi ukuthi yimiphi imibala engizoyisebenzisa!
Ngiyabonga ndoda! Ngokuzithoba kwami ​​kuManning "Omuhle" (niyazi, lowo oyiQB! NGEMPELA!)
Nov 9, 2011 ngo-7: 01 PM
Iwusizo kakhulu. Bengicabanga nje lokho ngenkathi ngakha ikhava yencwadi ngolunye usuku. Siyabonga ngokwabelana!
Nov 9, 2011 ngo-7: 34 PM
Nov 14, 2011 ngo-10: 09 AM
Nov 14, 2011 ngo-4: 59 PM
Iposi elihle kakhulu uDouglas, i-inforgraphic yakho inikeza ithuluzi elihle lokukhomba. Ngiyayithanda i-psychology yemibala kanye nomthelela wayo ekumaketheni. Lapho uhlaziya incazelo yakho yemibala, akunzima ukukhumbula ngokushesha izibonelo ezisekela ngayinye.